एक महिना लामो कठिन समय गुज्रिएपछिको एक दिन अर्थात् कोरोना निको भएपछिको दशौं दिन । खुट्टाहरू खासै तङ्ग्रिएका थिएनन् । तर मन तङ्ग्रियो । अनामनगरको डेराबाट बसन्तपुरसम्म पुग्ने रहर पलायो । रहरसँग शरीरको के लागोस् । रहर हिँड्यो । शरीरले पछ्यायो ।
सडकमा खासै गाडी गुडेका थिएनन् । धोबी खोलाको तिरै तिर बबरमहलतिर निस्किएँ । मनले भनिरहेको थियो, मृत्युको मुखबाट फुत्केर आइस्‚ सकेको जति हिँड् । आँखाहरू भनिरहेका थिए, देखेको जति हेर । म सधैंका लागि बन्द भदिएको भए तैंले हेर्न पाउँथिस् र ?
गाडीहरू कम गुडेको भएर होला, सडक किनारमा हुर्किरहेका बिरुवा धुलाम्य थिएनन् । फूलहरु खुलेर मुस्कुराउन पाएका थिए । दुबो गाँजिएको थियो । लाग्थ्यो, उनीहरू मलाई भनिरहेका छन्, एकैछिन आएर बस् । तैंले बाँचेको जिन्दगी उपहारमा पाएको जिन्दगी हो । डाक्टरहरुले उपहारमा दिएको जिन्दगी । केको हतार ? आइज, बस् । थकाइ मारेर जा ।
तर मन हिँड्यो । उसलाई रोकिनु थिएन । बसन्तपुर पुग्नुथियो । मनलाई पछ्याउँदै खुट्टाहरू पनि हिँडे ।
शहीदगेट अगाडि पुगेको थिएँ । छेउमै आएर, एउटा स्कुटर रोकियो । तर म हिँडिरहें । केही पाइला पर पुगेपछि बिस्तारै गुड्दै आएर फेरि रोकियो स्कुटर । यस पटक हर्न पनि बज्यो । हर्न बजेपछि म रोकिएँ । हरियो रङको स्कुटरमा, हरियै रङको टप्स् र कालो जिन्स लगाएकी युवती थिइन् । हेल्मेट खोलिन् । मास्क र कालो चस्मा लगाएकी । उनलाई यसअघि मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । देखेकै भएपनि मास्क र चस्मा लगाएपछि कसरी चिन्नु । मैले नचिनेको भावमा हेरिरहें ।
चिन्नु भएन ? उनी बोलिन् । आवाज कतै सुनेको हो कि झैं लाग्यो । तर कहाँ र कहिले, ठ्याक्कै अन्दाज लगाउन सकिनँ । नचिनेको भावमा टाउको हल्लाएँ । सायद मुस्कुराइन् होला । मास्कभित्र मैले कसरी देखुँ ? फेरि बोलिन्, ‘तपाईंले पक्कै चिन्नुहुन्छ ।’ तपाईंसँग मैले जीवनका १९ दिन गुजारेको छु । दिनमात्रै होइन, १९ रात पनि ।
होइन होइन, तपाईं झुक्किनुभो । म तपाईंले भनेको मान्छे होइन । मास्क लगाएको भएर चिन्नु भएन कि ! मैले मास्क खोलिदिएँ । अब त प्रष्ट भो होला नि ! म फिस्स मुस्कुराउँदै बोलें ।
मेरो कुरा सुनेपछि उनी सुनिनेगरी हाँसिन् । ‘मास्क खोलेर झन् प्रष्ट बनाइदिनुभो । तपाईं त्यही मान्छे हो‚ जसलाई म पढिरहेकी हुन्छु । तपाईंले अवश्य चिन्नुहुन्छ । चिन्नुभएन भने पनि गुनासो हुने छैन । बरु कहाँसम्म जाँदै हुनुहुन्छ ? मिल्छ भने म छाडिदिउँ ?’
उनको आग्रह स्वीकार्नुअघि, मैले अनुरोध गरें‚ ‘मास्क खोल्नुस् त‚ चिन्छु कि !’
मास्क र चस्मा दुवै खोलिन् । र पनि मैले चिनिनँ ।
चिन्नुभएन हैन ? ठिकै छ, गुनासो छैन । कहाँ जान लाग्नुभो ? अप्ठ्यारो लाग्दैन भने म छोडिदिन्छु । उनले दोहोर्‍याइन् ।
मैले बसन्तपुर जान लागेको र हिँडेरै जाने बताएँ । ‘तपाईंलाई नचिनेकोमा माफी चाहन्छु । बरु नाम भन्नुहुन्छ ?’ म कहिल्यै बिर्सनेछैन । मेरो आग्रह थियो ।
‘हैन हैन । तपाईले मेरो नाम र मलाई बिर्सनुभएको होइन । बरु नसम्झिनुभएको चाहिँ हो ।’ उनी हाँस्दै बोलिन् । मेरो नामचाहिँ मुस्कान ।
आहा ! कस्तो राम्रो नाम, ठ्याक्कै तपाईंजस्तै । अब मुस्कान र मुहार दुवै बिर्सन्नँ । मैले पनि परिचय दिनुपर्छ कि ? म र मेरा आँखाहरुले एकै साथ प्रश्न गरे ।
उनको जवाफ थियो, ‘बरु मैले थर र घर पनि भन्नुपर्छ कि ?’
पर्दैन पर्दैन । नामै काफी छ । उनको प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै मैले जवाफ दिएँ ।
‘उभिएरै कुरा गर्ने ? हिँड्नुस् तपाईंसँगै बसन्तपुर जान्छु । कतै कफी खाँदै कुरा गरौंला । बाँकी चिनजान उतै होला ।’ उनले प्रस्ताव गरिन् ।
‘हैन हैन । तपाईले मेरो नाम र मलाई बिर्सनुभएको होइन । बरु नसम्झिनुभएको चाहिँ हो ।’ उनी हाँस्दै बोलिन् ।
हुन्छ, मैले सहमतिमा टाउको हल्लाएँ । यसपटक उनको प्रस्ताव स्वीकार्न कुनै गाह्रो भएन । मनमा कुनै स्वार्थ र अपेक्षा थिएनन् । तर पुरानो सम्बन्धको हिसाब खोज्नु थियो । मैले नसम्झेको, उनले नबिर्सेको साइनोको इतिहास थाहा पाउनुथियो । स्कुटर शहीदगेटबाट बसन्तपुरतिर हुइँकियो । स्कुटरमा हामी अन्जान परिचितहरू हुइँकियौं ।
विशाल बजारको पार्किङमा पुगेर स्कुटर रोकियो । त्यसपछि हामी हिँड्दै, हनुमान ढोकातर्फ लाग्यौं । कोरोनाको डर हटिसकेको थिएन । त्यही भएर होला, खासै मानिसहरुको चहल पहल थिएन । फुटपाथमा फाट्टपुट्टमात्रै थिए, पसलहरू ।
सटर अधिकांशको बन्द थिए । चिया पसल र कफी सपहरू ग्राहक पर्खिएर बसेका थिए । ग्राहकहरू भने तर्किएर हिँड्थे । हामी पनि बाटोमा भेटिएका एकादुई मान्छेहरुसँग तर्किएरै हिड्यौं । र पुग्यौं, हिमालयन जाभा कफी सप ।
ढोकाबाट छिर्दै गर्दा हामीलाई पहिलो स्वागत सेनेटाइजरले गर्‍यो । हात मोल्दै हामी उक्लियौं सिरानको तलामा । हामी पनि के भन्नु, म मुस्कानलाई पछ्याइरहेको थिएँ । उनी चाहन्थिन्, ठाउँ खुल्ला होस् । छतको एउटा कुनो पक्रेर बस्यौं । अरु दुई-तीनवटा जोडी थिए, उसैगरी एउटा एउटा कुनोमा बसेका । शायद् उनीहरुको लामो प्रतीक्षापछिको भेट हुँदो हो ।
भिडिओमा गफिँदा गफिँदा दिक्क भएका हुँदा हुन् । उनीहरुले भौतिक दूरी बिर्सिएका थिए । दृश्य साक्षी थियो, कि उनीहरू हामी झैं अन्जान परिचित पक्कै थिएनन् ।
हामी परपर बस्यौं तर ठिक आमुन्नेसामुन्ने भएर । मुस्कान मास्क खोलेर मुस्कुराइन् । मेरा ओठहरू पनि खुले तर मास्कभित्रै । ‘मास्क खोले हुन्छ, मसँग डराउनुपर्दैन । यसै पनि कोरोना भएर भर्खर निको हुनुभएको हैन र हजुर ?’ उनको आग्रह र प्रश्न एकै साथ आयो ।
लौ, मलाई कोरोना भएको कुरा तपाईंलाई कसरी थाहा भयो ? मैले कसैलाई भनेकै छैन । छक्क पर्दै मैले प्रश्न गरें ।
भनौंला । हतार नगर्नूस् । जवाफमा उनले यति नै बोलिन् ।
टेबुलमा हेल्मेट, चस्मा र पञ्जाले विश्राम लिए । हाम्रो मौनतालाई वेटरको आगमनले भङ्ग गरिदियो । ऊ दुरी कायम गरेरै उभियो । इशारा गर्दै सोध्यो, के लिनुहुन्छ ?
मुस्कानले मतिर इशारा गरिन्, के लिने ?
मैले भनें, कफी ।
‘अरु केही ?’ यसपटक वेटरले मुख फोरेरै सोध्यो ।
मुस्कानको जवाफ थियो, ‘पछि मगाउँला ।’
वेटर गएपछि, मुस्कानलाई मेरो पहिलो प्रश्न थियो । तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो, मलाई कोरोना भएको ?
उनी फिस्स हाँसिन् र भनिन्‚ ‘तपाईंको उपचार गरिएको हस्पिटल, रुम नम्बर र बेड नम्बर पनि भन्न सक्छु । तपाईंका वरिपरी भएका बिरामीहरू र उनीहरूसँग तपाईंले मारेका बात सबै भन्न सक्छु । लेखकज्यू पुग्यो कि अरु केही भनौं ?’
यसपटक ओठको डिल नाघेरै हाँसो बाहिरियो ।
आश्चर्य भावमा मैले फेरि सोधें, ‘तपाईंलाई कोरोना भएको थियो ? अझ लेखक पनि भन्नुभो । कसरी थाहा पाउनुभो, म लेख्छु भनेर ?’
कोरोना भएको थिएन । बरु कोरोना लागेकाहरुसँग दोस्ती भएको थियो‚ जस्तो कि हजुरसँग । तर यो दोस्ती अलि विशेष छ । म त हजुरको फ्यान हुँ नि ! तपाईंका कथाहरू पढेको छु । गज्जब लाग्छन् । बरु अलि कम लेख्नुहुन्छ है ?’
मुस्कानले जिज्ञासा राखिन् ।
‘मूड चलेको बेला लेख्छु । कोरोना भएपछि मुड झनै अल्छि भएको छ । मलाई पढ्ने कोही त रैछ, खुसी लाग्यो । अनि फ्यानज्यू, हाम्रो सम्बन्धको कथा सुनाउनुहुन्छ ?’ मैले जवाफसहित प्रश्न पनि राखें ।
अवश्य, यति भनेर उनले हाम्रो चिनजानको कथा सुरु गरिन् । ‘तपाईंलाई कोरोना भएर ज्वरो आएको तेस्रो दिन अस्पताल ल्याइएको थियो । ठिक त्यही दिनबाट मेरो एक महिना लामो अस्पताल बसाइसहितको ड्युटी सुरु भएको थियो । हामी आलोपालो ड्युटी गर्थ्यौं । एक/एक महिनाको ।’
त्यसो भए तपाईं डाक्टर ? मैले बीचमै प्रश्न राखें ।
उनको छोटो जवाफ थियो । ‘होइन, डाक्टरको सहयोगी । बिरामीको सुसारे । अर्थात् नर्स ।’ यति भनेर उनले कथा अघि बढाइन् । ‘अरु बिरामीझैं तपाईं पनि सिरियस हुनुहुन्थ्यो । तपाईंलाई सिधै आईसियूमा भर्ना गरिएको थियो ।’
मुस्कान, मैले भोगेको तर मलाई यादै नभएको मेरै कोरोना कहानी सुनाउँदै थिइन् । म जिज्ञासु बनेर सुनिरहेको थिएँ ।
तपाईं अस्पताल आएको तेस्रो दिन । स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएको थिएन । चेन्जिङमा रुममा गफ गर्दै गर्दा मलाई एकजना साथीले सुनाएकी थिई । बेड नम्बर ११० को बिरामी निकै सिरियस हुनुहुन्छ । बिचरा भर्खरको हुनुहुन्छ । हाम्रै उमेरको होला है ? अर्की साथीलाई प्रश्न गर्दै उसले कन्फर्म गर्न खोजी । ‘हो, त्यही २७/२८ को हुनुुहुन्छ होला ।’ अर्की साथीको जवाफ थियो ।
हाम्रो अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा गरेर २४ जना बिरामी थिए । वार्डमा कति थिए, ठ्याक्कै याद भएन‚ किनभने बिरामीहरू आउने जाने भइरहन्थ्यो । त्यही भएर खासै हेक्का राखिएन । तर आईसीयूमा भएकामध्ये सबैभन्दा युवा तपाईं हुनुहुन्थ्यो ।
अर्को दिन म तपाईंको बेडनजिकै पुगेर रोकिएँ । तपाईं निदाइरहनुभएको थियो । शायद केही आराम महशुस गर्नुभएको थियो होला । हिजो साथीहरुले भनेको कुरा सम्झिएँ । एक नजर तपाईंको मुहारमा पर्‍यो । अर्को, बिरामी पुर्जामा । कतै देखेजस्तो लाग्यो । तर ठ्याक्कै सम्झन सकिनँ । बिरामी परेपछि तपाईं दुब्लाउनुभएको थियो । दाह्री झुस्स भएको थियो । त्यही भएर होला मलाई ठम्याउन मुस्किल परेको । तर तपाईंको पुर्जाले प्रष्ट बतायो । तपाईं मैले चिनेकै मान्छे हो । मेरो प्रिय लेखक हो । सुरुमा त असाध्यै खुसी भएँ । तर छिनमै आँखा भरिएर आए तपाईंको अवस्था देखेर । हातखुट्टा लल्याकलुलुक भए । तर पनि आफूलाई सम्हालें । र फटाफट आईसीयू कक्षबाट बाहिर निस्किएँ । त्यो दिन निकै नरमाइलो लाग्यो । काम गर्न जाँगरै लागेन । कसैसँग बोल्न पनि मन भएन । चिन्तामात्रै लागिरह्यो ।
आईसीयूका बिरामीलाई रातको बेला अलि समस्या पर्थ्यो । हामी, रातिको ड्युटी परेकाहरू चनाखो हुन्थ्यौं । बिरामीहरु निदाएको बेला, अक्सिजन मास्क ठिकठाक छ/छैन हेरिरहन्थ्यौं । समाचारहरूमा सुनिन्थे, १० मिनेट अक्सिजन नपाउँदा बिरामीको मृत्यु । लाग्थ्यो यस्ता समाचार फेरि सुन्नु नपरोस् । मैले तपाईं चिनेको दिनदेखि, रातमै पारें आफ्नो ड्युटी ।
अस्पतालभित्र कहिले सन्नाटा छाउँथ्यो । कहिले कोलाहल मचिन्थ्यो । मोनिटरको आवाजले बिथोलिरहन्थ्यो शान्ति । तर त्यही मोनिटरको आवाज जीवनको सम्भावना पनि थियो । जीवनको सम्भावनासहित बज्ने आवाजहरु जति चर्को भए पनि प्रिय लाग्छन् । बिरलै देख्न पाइन्थ्यो खुसीको वातावरण । विरलै फेर्न पाइन्थ्यो सन्तुष्टिको श्वास । पीपीई लगाएर हामी बिरामीको अगाडि उभिन्थ्यौं । सक्दो हौसला भर्थ्यौं । औषधि खुवाउने त हाम्रो नियमित काम नै भइहाल्यो । अरु बिरामीलाई भन्दा तपाईंलाई ५ मिनेट बढ्ता समय दिन्थें । अलि सोधिखोजी गर्थें ।’ यसो भनेर फिस्स मुस्कुराइन्, मुस्कान ।
मलाई कथा सुनेझैं लागिरहेको थियो । आफ्नै कथा । आफैंलाई थाहा नभएको कथा ।
कफीको अन्तिम घुड्को पिउनुअघि मैले भनिदिएँ, ‘हो हो, त्यो पेजमा मैले थ्याङ्क्यू प्रिय नर्स भनेर लेखेको थिएँ ।’
मौनता चिर्दै मुस्कान बोल्न थालिन् । ‘तपाईंका अहिले झैं पुक्क परेका गाला कहाँ थिए र त्यसबेला । मैले फोटोमा देखिरहने लेखकभन्दा भिन्नै हुनुहुन्थ्यो तपाईं । थोरै बोल्नुहुन्थ्यो । खान मनै नगर्ने । खुब कर लगाउनुपर्ने । फकाउनुपर्ने । तपाईंको आफन्त बन्न पाएकी थिएँ । मलाई मेरो पेशाले दिएको सौभाग्य सम्झन्छु । खुशी लाग्छ ।
तपाईंसँग एउटा खुबी रैछ । धेरै नबोलेर पनि मान्छेहरुलाई आफ्नो बनाउन सक्ने खुबी । आईसीयू कक्षका सबै बिरामी तपाईंलाई खुब मान्थे । म पनि तपाईंको खुलेर नबोल्ने बानीको फ्यान भएकी छु । तपाईंका कथाहरुको फ्यान छँदै थिएँ । कथा लेख्नेहरु धेरै बोल्दैनन् हो ? सोच्नुपर्छ होला नि हैन ?
मुस्कानको प्रश्नमा म मुस्कुराएँ मात्रै ।
झण्डै एकहप्ता यसरी नै बित्यो । तपाईं फिर्दै जानुभो । फेरिँदै जानुभो । १४ औं दिनमा तपाईंले विजय कुमारको किताब ‘सम्बन्धहरू’ ल्याइदिनुस् न भन्नुभएको थियो । याद छ ? मुस्कानको प्रश्न थियो ।
‘याद छ, त्यसपछिका घटना सबै याद छ ।’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘त्यसपछि तपाईं ठिक हुँदै जानुभो । म दिउँसोको सिफ्टमा गएँ । तर पनि सुत्नुअघि एकपटक आएर सोधिखोजी गरेकै हुन्थें । तपाईंले पीपीईभित्रैबाट सोधिरहने नर्सलाई मिस गर्नुभएन ?’ मुस्कानले पुलुक्क हेरेर सोधिन् ।
‘अहँ गरिनँ । कहिलै अस्पताल नबसेको मलाई त्यसबेला लाग्यो, नर्सहरुको व्यवहार यस्तै हुँदो हो । सबै बिरामीलाई यसैगरी माया गर्दा हुन् । यसैगरी सोधिखोजी गर्दा हुन् । तर अबचाँहिँ पक्कै मिस गर्नेछु ।’ मेरो जवाफले मुस्कानका आँखाहरु चम्किला भए । मलाई याद छ, म २० औं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको थिएँ । मैले ‘सम्बन्धहरू’ क्याबिनमा छोडिदिएको थिएँ नि, पाउनुभो ?
मेरो प्रश्न नसकिँदै मुस्कानले जवाफ दिइन् । ‘मैले पेज नम्बर १४१ पनि पढिसकें ।’
‘तर प्रिय लेखकज्यू, तपाईंलाई भ्रम नपरोस् है‚ मैले अरु बिरामीको पनि उत्तिकै ख्याल गरेकी छु । तपाईं मेरो प्रिय लेखक भएकाले तपाईंसँगका पलहरु सम्झनामा छन् । फेरि कथा बनाइदिनुहोला । तपाईको भर छैन ।’ मुस्कानको आग्रहपूर्ण चेतावनी थियो ।
One thought on “पीपीईभित्रको मुस्कान”
हरिश्चन्द्र विस्वकर्मा says:
Congratulation rajan sir yasta kathaa haru feri pani sunn r padhna payeyos thap unnati pragtiko kamana. Ma pani tapaiko fan hmm.